DHAGEYSO: 6 kun oo qof oo ku barakacay fatahaadda Degmada Afgooye & Wararkii ugu dambe…
Afgooye (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in fatahaadaha ku dhuftay magaalada ay ku barakaceen ilaa iyo 6 kun oo ruux, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta degmada.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in fatahaadaha ay ku sii fidayaan xaafado iyo deegaanno cusub oo ka mid ah gobolka Shabeellaha hoose.
Madaxweynaha JF Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay ku baaqay in wadajir loogu istaago sidii loo samatabixin lahaa dadka ku dhibaataysan degmada Afgooye iyo guud ahaan gobolka Shabeellada Hoose.
Ugu dambeyn, R/Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa maanta faray Wasaaradda maaliyadda in si deg-deg ah loo bixiyo $500,000 (Shan Boqol oo Kun oo Doollar) oo xukuumaddu ay u qorsheysay gurmad deg-deg ah oo loo sameeyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha dhibaatada badan ka geystay degmada Afgooye ee gobalka Shabeellada Hoose.
Haddaba halka hoose ka dhageyso wareysi ay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da la yeelatay guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahum Cumar Qaasim.
Tags: Barakac, deeq, Fatahaadda degmada Afgooye, Shabeellaha hoose
Shirka Dhuusamareeb oo caawa furmay iyo War-murtiyeed laga soo saaray +(AKHRISO)